बाबुरामले देखेको ओलीजम् - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अहिले देश ओलीमय भयो भन्ने चिन्ताबाट तर्सिएर छट्पटिएका बिपक्षी दलका नेताहरुको आपत्कालिन चित्कार सुनिन थालेको छ । जसको उदाहरण स्वरुप डा. बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा केपी ओली नेपाली जनमानसमा हाइ–हाइ कमाउने नेता बनेका छन ।
ओलीप्रती बहुसंख्यक जनताको आशा बढेर गएको कारणले अन्य दलका नेता बीच चिन्ता बढ्दै गएको छ र देश ओलिजम् भएको देख्न थालेका छन् । उनको त्यहीँ लोक प्रियता र राष्ट्रियतामा देखिएको अडानकै कारण हिजो ओलीसरकार परिवर्तन हुने कारण बन्यो । आफ्ना कुराहरूलाई स्पष्ट र बहुसंङ्ख्यक जनताको भावना सँग मिल्दो जुल्दो हुन आउने उनका प्रष्ट अभिव्यक्तिले देशप्रेम समेटेको आभास जनताले गरेका छन ।
ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा देशले लिएको राष्ट्रियताको चट्टानी अडान मात्र होइन देश विकासमा गरिएको आशलाग्दो बजेट बिनियोजनले पनि ओली सरकारले लोक प्रियता हाँसिल गरेको थियो । देश विकासमा गरिएको परिकल्पना, बुढाबुढीलाई भत्तामा गरिएको वृद्धिले केहि राहत भएको हुन सक्छ ।
विकास नपुगेको दुर्गमका गाउँ बस्तीमा विकासको उदेश्यले गरिएको बजेट विनियोजन, विकासको भावी रणनीतिक परिकल्पना आदि । त्यस्तै नेपालको दक्षिणी छिमेकी संग मात्र आश्रित एकहोरो बब्द ब्यापारलाई चिर्दै उत्तरी छिमेकीसंग थालिएको ब्यापारीक प्रयासको कारण नेपाली जनता बीच उनि लोकप्रिय हुन पुगे अर्थात नेपाली जनताले विकासको सम्भावक नेताका रूपमा उनलाई हेर्ने गर्दछन् ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दी नखुले सम्म भारतको भ्रमण नगर्ने अडानको बावजुद भारतीय पक्ष नाका खुलाउन बिवस भएको साँचो यतार्थ विपक्ष दलले जतिनै भ्रमछरे पनि जनताले बिर्सिएका छैनन् । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानमा असन्तुष्ट जनाइ आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गराउन भारतले गरेको नाकाबन्दी सँग डटेर सामना गरेका नेपाली जनताले के पि ओलीलाई त्यो बेला पनि साथ दिए जसरी अहिले पनि दिइरहेका छन ।
हिजो दश बर्षे जनयुद्ध हाँकेका डा. बाबुराम भट्टराई १६ महिना अघि एकाएक माओवादी सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै अर्को नयाँ नामको नयाँ शक्ति खोल्न पुगे । अपेक्षित उपलब्धि हत्याउन नसकेका डा.भट्टराई देश ओलीजम् भएको कुन्ठा पोख्न पुगेका छन । डा.बाबुराम भट्टराईले देश ओलीजम् भएको देख्नु भुल होइन साँचो हो । बहुसंंख्यक नेपाली जनता ओलीले लिएको राष्ट्रीयताको अडान प्रति आशावादी छन् । सम्पूर्ण नेपाली देश बिदेशी प्रभु सँग झुकेको हेर्न चाहादैन ।
झुटा र खोक्रा आश्वासनवाट आजित बनेका छन् नेपाली जनता । हिजो देशलाइ समृद्धि तिर पुर्याउछौ भन्दै ठुलो आन्दोलन गर्ने नेताहरुको घैटोमा घाम बल्ल लागे जस्तो छ । हो आज हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनता ओलीजम्को पक्षपाती भएका छन ।
ओलिको पार्टी सम्बद्धमात्र होइन अन्य पार्टी आवद्ध बहुसङ्ख्यक जनता पनि ओली प्रती आशावादी छन । कारण ओलिले भनेझैं जनता आज पनि एक शिङ्गो नेपाल राष्ट्र देख्न चाहान्छ । नेपाली जनता कहिलै पनि देश विभिन्न जातजातिको नाउँमा खण्डित भएको देख्न चाहादैनन् ।
सदियाँै देखी मिलेर बसेको नेपाली समाज विभिन्न साम्प्रदायिक रूपमा बिभाजित भएको स्वीकार्य छैन नेपाली जनतालाई । बृटिशको अत्याधुनिक हात हतियारसंग खाली हातले युद्ध लडेर पुर्खाले जोगाइ दिएको नेपाल देश प्रती अझै पनि नेपाली जनताको स्वाधीनता घटेको छैन । आफ्नो सार्भभौम प्रती नेपाली जनता संधै सचेत छन् । नेपाली जनता देश कसैको उपनिबेश भएको हेर्न चाहादैन । नेपाली जनतालाई कसैको अधिनायकवाद स्वीकार्य छैन ।
डाक्टर भट्टराई विद्वानका पनि विद्वान नेता हुन् त्यसमा दुईमत छैन । तर उनले कहिले काहीं आफ्नो विद्धवता किन भुल्न पुग्छन् ? बेलाबखतको अभिव्यक्तिले आलोचित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । डा. भट्टराई जतिको उचाई भएको ब्यक्तिले किन यस्तो तुच्छ र सङंकिण प्रकारको विचार ब्यक्त गर्छन जनता चकित छन् । डा. बाबुरामबाट अप्रत्याशित रुपमा आउने यस्ता अभिव्यक्ति देखि बेला बखत हामी ससंकित हुन पुग्छौं । उनलाई लाग्ने गरेको भारतपरस्त आरोप र बेला बखतको उनको अभिव्यक्तिको संयोग मात्र होकि त्यसमा तादम्यता छ भनेर हामी ससंङ्कित हुनु परेको छ ।
हो, आज बाबुरामले भने झैं देश ओलीजम् भएको छ, ईष्र्या, लोभ, लालच भन्दा पनि किन देश ओलीमय हुन पुग्यो भन्ने हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । किन ओलीको पछाडी एउटा ठूलो जनमानस विश्वास गरेर लागि परेको छ ? देश किन भट्टराईजम् हुन सकेन मिहिन रूपमा डा.बाबुरामले कहिलै सोच्नु भएको छ ? नेपाली जनता के चाहान्छन ? कस्तो राष्ट्रको परिकल्पना गर्दछन् ? सिङ्गो एक देशको माया आफ्नो स्वाधीनतामा अडिक जनताको भावनालाई बुझी देश भट्टराईजम् बनाउनुस कमरेड किन ओलीजम्को ईष्र्या मात्र गर्नु हुन्छ ?